Chivabvu 1, 2013 pa 11:42 ndiri
kuti handimbozvifariri. Iwe waiva chikonzero nei ndakauya Wordpress. Ndiri chaizvoizvo mwoyo mune Wordpress Moderators. Iwe akakodzera chete chete linked duku.
Chivabvu 1, 2013 pa 3:48 pm
tsime, Ndinovimba uchikwanisa vanorichengeta achimhanya.
Pamwe unogona kutanga chirongwa kuudza WordPress isu tose tiri kufara chaizvo. Ndakatanga kushandisa WP kunyanya nokuda plugin kwenyu.. zviri nani zvikuru nokuda SEO & Links musi Google. Ndagara webmaster nokuda 17 yrs uye kuti vandibate kurega kushandisa Dreamweaver & chinja kuti WP.. imhaka Transposh. 🙂
Chivabvu 1, 2013 pa 5:43 pm
Thanks nokuti mashoko emutsa, unogona kutora izvi Wordpress forum, uye regai Moderators vanoziva, asi handitendi ichi zvichabatsira zvikuru.
Ndinofungidzira asiri Wordpress kugadzirisa achange kuuya zvikuru nokukurumidza zvino.
Chivabvu 1, 2013 pa 5:34 pm
Wow kuti chichirwadza saka, apo tinogona anonyunyutirei??
Chivabvu 3, 2013 pa 8:27 pm
Unogona vanotsutsumwa pamusoro Wordpress forum, asi handifungi munhu vachateerera.
Chivabvu 1, 2013 pa 10:48 pm
Eya iri nhau zvakaipa chaizvo. Handina kufunga kuti WordPress chikwata kubatwa plugin Developers zvakadai. Vanofanira kuita ongororo yekuvimba zviito zvavo. Kufanana iwe wakati, kubatana anogona kubviswa uye kuti zvaigona kuitwa kwenguva yakareba zvino. Chii dambudziko? Your pfungwa vanopfuura chikonzero uye ndakapedzera plugin rwako zvizhinji nzvimbo yangu, izvo akandiunza zvizhinji mamwe nedzevanhu vakawedzera Nzvimbo chavangayeukwa muna Google. Ini shure imi vakomana iyi.
Child Themer anoti
Chivabvu 2, 2013 pa 9:09 pm
Zvakanaka kuti inongova nhamo. Handina kuwana chii hombe iri. Ndinofara uchiri kupa bairira sezvo iri Websites shoma ndishandise.
Francois Lachance anoti
Chivabvu 3, 2013 pa 3:16 ndiri
WordPress anotyisa,chinhu bedzi kuti Wordpress yakanaka nenzanga yokuvaka semi Guy wacho,uyo akaisa yakawanda nesimba kuti hapana mari uye shoma recognition.You Guy akaita aidzvinyirira basa pamwe plugin ichi uye tariro mucharamba kudaro kunyange pashure that.Best weMhanza
Chivabvu 3, 2013 pa 3:34 pm
Vanobvumirana Francois. WordPress anotyisa pasina Developers semi.
Chivabvu 4, 2013 pa 2:01 pm
Ndinofunga kuti mutemo uyu Wordpress ari kurambidza Google Penguinkuva penality uye nokuponesa nzvimbo iyi kubva mutongo.
Chivabvu 4, 2013 pa 2:20 pm
An dzinonakidza Pfungwa, asi ini chinhu tinokwanisa chaizvo kugadzirisa Google pasina wordpress.org patronization, uyewo – zviri kubvumirwa link pamusoro Widgets dzako, kumbira Facebook, Twitter, ShareThis(inoita peji kuti chinzvimbo 10), uye vamwe vazhinji
Ana Kelly anoti
Chivabvu 5, 2013 pa 9:44 pm
Ini ndiri urombo Ndave kushandisa plugin kwenyu kwemakore kwete uye ndinorida….
Ndinovimba imi takanyatsoperera naro.
Chivabvu 6, 2013 pa 12:42 pm
Ndinoda kukuudzai kuti ini chose akatsigira chisarudzo chako 🙂
Rambai Rocking dudes 😉
Chivabvu 8, 2013 pa 2:43 ndiri
Nokuti zvinyorwa, iwe uri zvakakwana zvakanaka kubvumirwa kuva link Widget yako. Mitemo iri WordPress.org chete vanoti kubatana anofanira kuva vanosarudza-vari kubatana, kwete vanosarudza-mumwe.
Unogamuchirwa kuva plugin rwenyu WordPress.org kana kusarudza kuti unoda kugara pedyo iyoyo chaiyo utongi.
Chivabvu 8, 2013 pa 11:35 pm
Ini ndiri OK nemamiriro acho ezvinhu sezvo iye zvino. Ini akashandisa kuva “muchizvikudza dzinofambiswa ne Wordpress” pamapeji dzangu, izvo netsaona unouya pamwe dingindira Ini ndakagadza (uye ndinofunga kuti default madingindira ane utsinye, kwete vasarudze-vari). Ichi hachisisiri zvakadaro, nekuti ndiri ndoda kudada kuti.
Kana mutemo uyu zvichakurukurwa akazoongororazve (unogona kuverenga mashomanana vanoshandisa mashoko pano, pamusoro kutarisira izvi, kuva OK neizvi, Achisiyanisa, etc.) Ini muchafungisisa.
Ndinotendawo zvakasimba kuti nokuvhara plugin nechimwe chinhu yave ikoko 4 makore, izvo hakusi gaping kuchengeteka neburi ndiyo chiito chakaipa. Chete mwedzi ago ndakanga ndiine offline NO, uye angangodaro asina kukwanisa kugadzirisa izvi zvakanaka apo. Handikumbiri pfungwa kuti iwe tora nguva yako afungezve vakati itsika (kupa chiziviso, vamwe zvine timeframe, chero). Izvi kumbova munhu nyaya yakadaro dzinonetsa, kuti zvaida kushandiswa simba zvakadaro.
zvisinei, ngaavongwe nokuti chido chako, uye nguva yako, tariro tichasangana mune ramangwana riri okuti nani.
Mr mitema anoti
Chivabvu 8, 2013 pa 12:50 pm
(Unogamuchirwa kuva plugin rwenyu WordPress.org kana kusarudza kuti unoda kugara pedyo iyoyo chaiyo utongi.)
ngaavongwe Otto kuti ikoko uye kujekesa
Ofer kuti akanaka Tinoda wako(yedu) bairira
Transposh kunge mupenyu
Wolfgang Bloomfield anoti
Chivabvu 8, 2013 pa 10:20 pm
Mhoro, Ndaingoda kuti mazvita chaizvo transposh plugin, zviri shasha chokushandisa, Handina kutorwa kubva wako panzvimbo, uye ndiri nokudada kuratidza linked yako.
Handigoni kunzwisisa nei zvawave zvaitorwa, sezvo plugins vakawanda vane rinobatanidza avo panzvimbo kwavari, hapana chakaipa ichi sezvo iri pachena plugin, saka imi kanenge vanofanira kuwana kubatana nawo.
Niels Jacob anoti
Chivabvu 9, 2013 pa 10:56 ndiri
Thanks nokuti basa renyu – Ndinonyatsonakidzwa plugin yako, uye ndinovimba uchange shure pamusoro WordPress nokukurumidza. Panguva iyi, sei Ini kunatsurudza zvizere shanduro? (Ndinoda dzimwe Widgets kupfuura default) Ndinofanira uninstall ari WP plugin, download + kuisa plugin rako Download muchikamu? Kana kuti vadzime zvose mushanduro dzangu iyezvino?
Chivabvu 9, 2013 pa 1:05 pm
Izvi hazvizorambi vadzime shanduro yenyu, nzira imi pfungwa achashanda. Pane imwe nzira zvazvo
1. Ndiwedzere kubva wordpress.org kuti shanduro 0.9.3
2. Enda pazviruva uye cheki “ndiwedzere zvizere shanduro”
3. Wongororai kuti upgrades zvakare (muve kumanikidza ichi)
4. Ndiwedzere zvizere shanduro (pari zvino 0.9.3.1)
Chivabvu 9, 2013 pa 2:23 pm
Ndotenda kwazvo – Ndakashandisa mazano ako okupedzisira, uye zvakashanda kukuru!
Chivabvu 9, 2013 pa 2:45 pm
Ini zvetsaona upgraded kuti 0.9.3 Via Wordpress repository, asi ikozvino zvisipo mireza. Saka uninstalled uye kutorwa shanduro wako panzvimbo. Plugin haazorambi yakaiswa, rinoti hapana chinoratidza plugins kuwanikwa. Zvino ndiri kurasikirwa kwako rokushandura mudziyo kubva yedu yepaIndaneti.
Chivabvu 9, 2013 pa 3:18 pm
Kuongorora ichi, zvisinei, Ndapota verenga dzangu dzimwe mhinduro sei kuti ndiwedzere kubva repository.
Chivabvu 9, 2013 pa 3:29 pm
Mhoro, ngaavongwe nokuti mhinduro yako. Pandaiva zvazvakaipira shure panguva Download peji rako ndakaona 0.9.3.1 batanidzo. Ndaifanira Kudzima mafaira kubva 0.9.3 uye zvadaro dzishandise 0.9.3.1. Zvinonzi kushanda yakaisvonaka zvino, pamwe mireza vakadzorerwa. Ndotenda kwazvo, uye ndine urombo ezvinhu pamwe WordPress.
Website yedu anopararira Shoko raMwari munyika yose, uye ndinoda kuti muzive kuti ako shanduro injini ibasa mweya achiponeswa.
Chivabvu 13, 2013 pa 5:21 pm
Wordpress haagoni kuva Multi mutauro cms pasina transposh! pane zvakawanda plugins rokushandura nokuda Wordpress asi vose vari maturo 😀 ndinofara saka kushandisa transposh uye kubatsira kuti Persian mutauro rutsigiro. 🙂
Chivabvu 18, 2013 pa 11:38 pm
Hey Ofer, ayo vaunoziva 🙂
Just kuti muzive kuti nyaya yangu yakanga yakatarwa apo ini reuploaded akadarika shanduro Pfekai Server kareko, haana chokwadi sei kana nei, asi akaisa.
Zvino ndava kuona chii imi paakashambidzwa plugin kwako kubviswa WordPress, Chokwadi chinorwadza, Ini here kufunga vaviri vanofanira kugadzirisa uye kusangana hafu nzira iri kusanzwisisa uku, nekuti mumwe nomumwe kwezita.
Ini chete upgraded ichangobva shanduro, saka kure saka zvakanaka, achaita kuongorora Stats uye motokari vachitarisira kumashure nyaya wont hunodzoka.
Ndinokutendai pakuchengeta Transposh mupenyu.
Chivabvu 19, 2013 pa 12:04 ndiri
Happy kunzwa dambudziko rako aenda, achida iwe rombo mune ramangwana 🙂
Chivabvu 27, 2013 pa 9:18 ndiri
Ndinokutendai zvikuru nokuda Transposh bairira-vari. The WordPress Kutonga hakusi zvakanaka. Handitombobvumirani norutivi. Upgraded zvakazara shanduro uye varatidze “rakashandurwa Transposh” batanidzo.
Your bairira-muna ndiyo nyore kushandisa.
Chikumi 24, 2013 pa 10:37 pm
riri plugin vachiri kushanda pasi shoko wokudhinda Website avo akatogadza ari plugin, unogona aigona kupa Download Link kubva Un yepamutemo repo…?!
Chikumi 24, 2013 pa 10:40 pm
Dhanilodhi pamusoro Wordpress repository kunotungamirira pano, unogona kutarisa dhanilodhi zvizere shanduro, uye itai chinhu ndiwedzere, neimwe nzira unogona kushanyira Download peji pano.
Chikumi 26, 2013 pa 2:15 pm
Kudhanilodha EZVAKAITIKA http://svc.transposh.org/transposh.latest.zip…
Download akakundikana. rambidzwa
Chikumi 26, 2013 pa 2:29 pm
Chinhu pamusoro Server yako pamwe ichivharira ichi, ndapota edza kudhanilodha manually uone kuti uchikwanisa kuwana faira
Nyamavhuvhu 15, 2013 pa 7:59 pm
Ndinobvumirana. WordPress Staffers, sokuziva ndava akaziva, chaizvoizvo kuita basa chakaipa kwazvo.
Ivo kuidzima Forum wako anopindura chete nokuti vanoda kuva 'First’ kupindura kana kusarudza kuti mhinduro dzako hadzina kupedza (Ini kungakupa 2 mazita, Asi ndaizoremekedza havadi) uye vanoda kupa pachedu vaibhadhara mabasa avo unobatanidza avo nyanzvi Profiles (ehe..). Ndicho chete matema rutivi WordPress, uye tariro iyi dzinoshandurwa..
Dave Main anoti
Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 2:28 pm
Ziva zvauri kureva pamusoro akavhuna plugins kutsigira aifarira neshanduro. Rimwe shoko nemutsa nokuti – pathetic.
Lovemore kufarira nzvimbo yako. Achachengeta njanji. Fantastic Mushanduri.
Pashure mushanduri kwako vose havasi kunyange 2nd yakanakisisa.
Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:34 pm
Thanks mashoko ako mhando
Zvita 20, 2013 pa 4:31 pm
Uwandu basa kuti imi vakomana kunge muhombodo ichi bairira-mune riri zvinoshamisa.
Ndinoshevedza kushandira vasiri purofiti zveutano masangano uye handigoni kukutaurira sei zvenyu bairira-muna kwakatibatsira kukurukura zvedu vokuSpain vanogara.
Just kufamba uye kuwedzera mushanduro kwedu zvakazonaka.
Bravo shamwari dzangu… kungotadza maiwe sei WP akaita kuti zvikuomere kusimudzira pachako.
Ndichaporeswa kukurudzira iwe, zvechokwadi. Shoko muromo dzimwe nguva yakanakisisa kusimudzirwa.
Bogdan Storm anoti
Zvita 31, 2013 pa 2:47 ndiri
Ndapota regai kusiya munda uyu uye Transposh ndinoraramisa.
Kana uchida tinogona kutaura nezvazvo zvichiita zvinobatsira uye ndichaita kukubatsira mazano maererano kuti.
Haudi WordPress Website kusimudzira basa renyu.
Ramba netariro UP uye ngatirege kukubatsira.
Thanks nokuti kunoshamisa basa uye kuita plugin wako mumwe zvakanakisisa chandakaona kubva … nokusingaperi.
Ndira 15, 2014 pa 6:45 pm
Ndichaudza nomufaro kubhadhara kuramba kutsigirwa pamusoro payo.
Kurume 17, 2014 pa 11:03 pm
Hey, Ini VANODA mhinduro dzako pamusoro WP.org nzvimbo apo plugin wenyu awana rimwe nyeredzi Rating. chido Your zvaunovaitira zvinoratidzwa mutsanangudzo izvi. Kepp @ ​​payo.
James Hilliard anoti
Chikumi 2, 2014 pa 4:19 pm
The mods panguva Wordpress vanofanira chaizvoizvo afungezve travesty iyi pfungwa. Paunenge achinongedzera… OSE mugove bhatani ane kubatana kune nomumwe panzvimbo. The Facebook plugins kutsanangura kwakadaro… SEI yaunopindura EDZA wokubatanidza WORLD kunze GOOGLE kushandurira EVERYPAGE!!!
Chikunguru 10, 2014 pa 8:12 pm
The Bee anoti
Kukadzi 6, 2015 pa 4:28 pm
Guys “zvinoshamisa basa!” Ndinoda plugin wako uye ndinoda mafungiro ako kuti kusimuka kuti zvakarurama!
Wordpress zvaisazova Wordpress pasina zvinotyisa plugins akaita seenyu. Kufanana iwe wakati Facebook, yakabatana In, Twitter, Google…vose vawane kuchengeta kubatana shure wadii iwe?
ndiri 100% shure iwe, Ini kuratidza plugin renyu uye ini kuratidza linked yako! Credit anofanira kupiwa apo mbiri yakafanira. Maiva zvakanaka zvakakwana kuti vanhu vakawanda kudaro vanoshandisa plugin wako uye wakakodzera ose wedzeredzei nokuti! Chiri ini zvinoshamisa kuti vanhu Wordpress havagoni kunzwisisa basa rakaoma kuti unopinda chinhu chakadai. Imi vaizofunga vose vanhu, vangadai kunzwisisa kuti vakawanda. Shure kwezvose, WordPress ari kubatsirwa basa renyu, vose WordPress vanoshandisa vari kubatsirwa basa renyu, saka…nei imi? Ndichaita muchizvikudza kuchengeta plugin dzenyu yangu yepaIndaneti chete kubatana musana! Uye ndichakuudza vadzidzi vangu vose kuita zvakafanana. Muri kupfuura vakakodzera. Ngaararame utongi hwegutsaruzhinji!!!! 🙂
Kukadzi 22, 2015 pa 7:29 pm
Zvachose nezvese munoti, The Bee! Ndinoda mafungiro Transposh wacho zvakare …uye ini zvechokwadi plugin ichi penya izvo ndava chete chete yakaiswa uye inoshanda zvakanaka!
Btw, Transposh, Ini ndisingagoni kuona chero mupiro paypal bhatani kupi zvako?? Ndinofunga unofanira mumwe 🙂 …nekuvongwa zvikuru ichi plugin yakanaka!
Ali najeb anoti
Kukadzi 28, 2015 pa 11:28 ndiri
Ndiko kururama. plugin ichi chaiva zvakanakisisa ini ndiri gnna kuramba uchishandisa kuitevedzera nepfambi vakomana dont vanoda Wordpress, uye a zvakanaka vanofanira appreiate basa muUri navo uye dzinonyevera nepfambi vasati kuita kuti, thats zvakaipa chaizvo
Ethan Sanabria anoti
Chikumi 5, 2015 pa 9:02 pm
Eya ichi sucks. Ini here sezvizvi bairira-vari! Kuti kambani vachitsvaka kuwedzera yechiLatin America, Transposh akava munhu anokosha kwazvo chikamu urongwa. Ndingadai nomufaro kuchibhadhara!
Very tsamwisa, WordPress!!!